I-Chalet yothando eneJacuzzi - I-Airbnb
I-Chalet yothando eneJacuzzi
Quitandinha, Paraná, i-Brazil
I-indlu yeholidi eyakhiwe ngokhuni ephelele ibungazwe ngu-Diego
Sitholakala ku-60km ukusuka eCuritiba/PR;
8.5 km ukusuka enkabeni ye-Agudos do Sul/PR, futhi ingu-4 km kuphela womgwaqo ongagandayiwe ongena kalula.
- Ihlala abantu abangu-2. - Asihlinzeki nganoma yiluphi uhlobo lwenkonzo: ukudla noma izinkambo, kodwa singabonisa izikhungo esifundeni.
- Ifakwe ubhavu oshisayo, i-Smart TV, indawo yokupheka, i-microwave, ihhavini kagesi, isiqandisi esiyiduplex, izinto zasekhishini eziyisisekelo (eziphelele), ibhokisi lemibhede emibili, ukufudumeza kwegesi.
- Indawo engaphandle inedekhi, enamagumbi okuhlala ilanga kanye nombono okhethekile wemvelo.
- Sitholakala endaweni yasemaphandleni, sihlinzeka nge-wi-fi, noma kunjalo, singase sibe ngaphandle kwesignali unomphela.
- Kungase kube namaconsi ekukhanyeni, njengoba sisendaweni yasemaphandleni, leli qiniso alivamile ukwenzeka.
***Sicela uqaphele ukuthi ukufakwa kwesiginali yeselula kubuthakathaka esifundeni.
Ngena ngo-5:00 ntambama
Phuma ngo-14:00 amahora
- Ngemva kokubhukha, idatha izocelwa kubo bonke abantu abakubekelwe ukubhaliswa;
- Ukufinyelela kule ndawo kungokhiye we-elekthronikhi nephasiwedi, akukho ukuxhumana komuntu siqu okudingekayo.
- Asizamukeli izilwane ezifuywayo.
- Akuvunyelwe ukuthatha i-bed nelineni yokugeza ngaphandle kwesakhiwo.
- Sicela kuphela ukuthi uma uphuma endaweni (uhlole) isivakashi sivale umnyango.
- Uma kwenzeka umonakalo wempahla, imali enani lengxenye entsha yokushintshwa (noma elilingana nesevisi yokulungisa) izokhokhiswa. Imililo evuthayo ayivunyelwe otshanini nanoma iyiphi enye indawo ngaphandle kwaleyo ehloselwe le njongo kuphela.
- Izinja ezifuywayo zomakhelwane zijwayele ukuvakashela izikhungo zethu, kodwa zithobekile.
- Isakhiwo sinezitebhisi, ezinotshani kanye/noma izindlela eziwumngcingo ngokujwayelekile, futhi umhlaba nawo unokungalingani. Ngakho-ke asincomi kubantu abanokunyakaza okuncishisiwe nokunye okunjalo.
- Ngenxa yokuxhumana okuseduze neMvelo, ukubonakala kwezilwane zasendle nezinambuzane eSifundeni kungenzeka. Masilondoloze izilwane zasekhaya!
4.97 · 67 okushiwo abanye
Hlola ezinye izinketho ezise- Quitandinha namaphethelo